के मायालु प्रिय रहन के गर्ने?
ठूलो, यदि एक प्रिय मानिस। तर कसरी वर्ष आउन लागि, पहिलो थियो भावना को हिंसा राख्न?
यो केवल एक मनपर्ने, तर पनि एक मित्र छ
पूर्ण भरोसा आफ्नो सम्बन्ध मा एक वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। यो प्रिय बस तपाईं वरिपरि आफैलाई हुन सक्छ भनेर बनाउन उहाँले बलियो र शक्तिशाली देखा पर्न आवश्यक छैन भनेर। जे भए पनि, यो कमजोर हुन कुरा हो। तर फरक तिनलाई एउटा कमजोरी देखाउन अनुमति भने, उसले धेरै भरोसा तपाईं हुनेछ भन्ने छ। उहाँले निन्दा र घृणा को डर बिना, मेरो विचार, योजना, डर र शंका तपाईंले साझेदारी हुनेछ। तपाईं एक चाहिन्छ भनेर देखाउन भने सिद्ध मानिस गल्तीलाई बिना, आफ्नो कमजोरी अझै पनि कहीं जाँदै छैन। बस, उहाँले आफ्नो विचार र भावना तपाईं बिताइरहेका बिना लुकाउन होसियार छ।
यदि तपाईंलाई लाग्छ कि एक प्रिय मानिस भनेर , गलत गरेको अन्य "सहित"। बस आफ्नो असल मित्र - आफ्नो प्यारा भनेर कल्पना गर्नुहोस्। तपाईं यस्तो अवस्थामा कसरी व्यवहार थियो? छैन पनि आम मानिसहरू तिनीहरूले आफ्नै सबै समस्या समाधान गर्न खोज्नु, सल्लाह आवश्यक छ। बस प्रकट समर्थन। तपाईं जस्तै केही भन्न सक्छौं: "हो, को पाठ्यक्रम, तपाईं एकदम सही थिए, तर के छ अब पूर्ववत छैन, गरेको, म हामी हुनेछ, तपाईंको पक्षमा छु चिन्ता नगर्नुहोस् हामी कुनै पनि मामला मा अब छ भन्ने तथ्यलाई देखि सुरु गरौँ .... यो अवस्था सामना। तपाईं बलियो / बुद्धिमानी / ... मानिस हुनुहुन्छ। सबै राम्रो हुनेछ। " तपाईं मीठो "कटौती" भने, यो केहि परिवर्तन गर्दैन। एक मानिस उसले गलत हो भनेर बुझ्नुहुन्छ भने, त्यो गलत कार्यहरू लागि आफु गाली गर्न हुनेछैन। कुनै आवश्यकता आगो गर्न इन्धन थप्न र आफ्नो आत्म-सम्मान मा दबाव राखे। मित्र हुन। आफ्नो मनपर्ने मान्छे उहाँले प्रेम र यसका सबै कमीकमजोरी सराहना थाह दिनुहोस्।
एक "मां" नगर्नुहोस्
मातृ अन्त हामीलाई राखे, तर मानिसले आफ्नो unspent प्रेम तल ल्याउन छैन। उहाँले यद्यपि यति रहिरहन्छ, एक वयस्क र स्वतन्त्र मान्छे हो। उनीहरूले भन्न रूपमा उहाँले सकेजति को हेरविचार, चाँडै लिन पनि राम्रो बन्न भने "घाँटी र dangle खुट्टा मा बस्न।" वा आफ्नो अत्यधिक हेरविचार को थकित र तपाईं विरुद्ध अप बढ्छ। दुवै विकल्प हामीलाई अनुरूप छैन। आफ्नो प्रिय स्वतन्त्र निर्णय र आफ्नो नतिजा लागि जिम्मेवार छ गरौं। तपाईं आफ्नो कार्यहरू स्याड अन्त गर्न नेतृत्व गर्नेछ भन्ने हेर्न भने पनि, जिद्दी छैन। तपाईंको आफ्नै राय व्यक्त र उहाँलाई विकल्प को स्वतन्त्रता छोड्नुहोस्। अन्यथा, समर्थन सट्टा तपाईंले थप एक बच्चा प्राप्त हुनेछ। एक मानिस एक आमा जस्तै व्यवहार गर्ने एक महिला लागि जीवन्त भावना सक्षम छैन।
पूर्ण महसुस गर्नुहोस्
अनुमति आफैलाई प्रेम गर्न! आफैलाई प्रेम र आफ्नो प्रिय गर्न स्नेह, हेरविचार र आवेग दिने। आफ्नो सम्बन्ध एक बन्न नदेऊ "सुस्त पागलपन"। तपाईं मनोरञ्जन, सोख संयुक्त साहसिक हुनेछ गरौं। छैन जीवन "खट्टा बारी" गरौं गर्छन्! प्रयोग!
पनि "शोभा" सबै किसिमका बारे मा भूल छैन। उदाहरणका लागि, उहाँलाई एक कोमल वा भावुक एसएमएस, लेख्न तपाईं वरिपरि छैनन् जब। तपाईं प्रिय केही मूल व्यक्तिगत उपहार विचार गर्न सक्नुहुन्छ। , बिहान कफी पिउन र केहि कुरा उदाहरणका लागि - आफ्नो व्यक्तिगत परम्परा सिर्जना गर्नुहोस्। तपाईं आफ्नो जीवन आफैलाई सिर्जना! यो काम।
आमाबाबुले आमाबाबुले मानिस संग पहिलो परिचय
तपाईं पछि चलाउन, वा बोल्न सिक्ने र ध्यान आकर्षित गर्न केटी कसरी बनाउने
धेरै मानिसहरू त्यहाँ रूस मा पूर्वनिर्धारित थियो जब समय सम्झना
Avocados: यसलाई कसरी खान र कसरी छनौट गर्नुहोस्
अनुसार अपराधी कोड को धारा 25 संग अवधारणा र आशय को प्रकार
ताहिती कहाँ छ? ताहितीमा आफ्नो बसाइको आनन्द लिनुहोस्। नक्शा मा ताहिती कहाँ छ
एकीकृत ग्राफिक्स कार्ड Radeon HD 6250
सामाजिक मा कमाई। सञ्जालहरू। Vkontakte को मनमा कसरी पैसा कमाउने?
लक्षण Tuzhilin: उपचार